Myanmar Unicode Font Ttf Download For Mac Download
Myanmar Unicode Font Ttf Download For Mac Windows 10
Unicode Myanmar Font
Myanmar Unicode Font Ttf Download For Mac Windows 7
TattooFont3D.com is offeringanew 3D font in the handicap theme fonts. 3Ddeaf.ttf isa3D font, for Mac or PC,a3D tattoo font that you can use to create incredible images, advertisement, 2D or 3D documents with the leader applications in imaging. ပြည်ထောင်စုဖောင့် ( Pyidaungsu Font Download ) မြန်မာယူနီကုဒ် စာရိုက်နည်း; ယူနီကုဒ် စာရိုက်စနစ်များ; Myanmar Unicode Keyboards. Add Myanmar3 Layout to KeyMagic; Install Keymagic on Ubuntu. ပြည်ထောင်စုဖောင့် ( Pyidaungsu Font Download ) မြန်မာယူနီကုဒ် စာရိုက်နည်း; ယူနီကုဒ် စာရိုက်စနစ်များ; Myanmar Unicode Keyboards. Add Myanmar3 Layout to KeyMagic; Install Keymagic on Ubuntu.
ယူနီကုတ်စံနှုန်းများကို လိုက်နာသော ဖောင့်များကို အသုံးပြုထားပါက ယူနီကုတ်ဖောင့်အမျိုးအစား တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဖောင့် ( Pyidaungsu Font )တွင် မြန်မာအက္ခရာစာလုံးများသာမက သက္က​တ/ပါဠိ၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ စ​ကော​ကရင်၊ ပိုး​ကရင်(အနောက်​ပိုင်း)၊ ပိုး​ကရင် (အရှေ့​ပိုင်း)၊ ပအိုဝ်ႏ၊ ကယား၊ အရှိုချင်း၊ ပ​လေး​ပ​လောင်၊ ရူ​မာည်း​တ​အောင်း၊ ခန္တီး​ရှမ်း၊ တိုင်း​လျမ်ခေါ်​ရှမ်း​နီ၊ ရွှေ​ပ​လောင် စသည့် တိုင်းရင်းသား စာပေအက္ခရာများပါ ထည့်သွင်းထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
: Office For Mac Os X